Psychology Mgbasa Ozi: Otu Iche Echiche na Mmetụta Na-emetụta N'ego Mgbasa Mgbasa Ozi Gị | Martech Zone
A na-ekpughere ndị na-azụ ahịa na nnukwu olu mgbasa ozi kwa awa 24. Anyị esila na ndị okenye ruru 500 mgbasa ozi kwa ụbọchị na 1970 ka ihe dịka 5,000 mgbasa ozi kwa ụbọchị Nke ahụ bụ ihe dịka nde mgbasa ozi 2 kwa afọ nke onye ọ bụla na-ahụ! Nke a gụnyere redio, telivishọn, ọchụchọ, mgbasa ozi mmekọrịta, na mgbasa ozi ebipụta. N'ezie, a na-egosi mgbasa ozi ngosi puku ijeri 5.3 n'ịntanetị kwa afọ Ebe ọ bụ na anyị na-egosipụta ọtụtụ mgbasa ozi, olee otu ndị mgbasa ozi na ndị ahịa si agba mbọ hụ na mgbasa ozi ha pụtara? Psychology.
Nnukwu mgbasa ozi na-abanye n'ime ma ọ bụ mmeghachi omume mmetụta uche anyị ma ọ bụ nke ezi uche. Nzaghachi mmetụta uche na mgbasa ozi nwere mmetụta dị ukwuu karị na ebumnuche ndị na-eri ihe ịzụta karịa ezigbo ọdịnaya mgbasa ozi. Site na ịbanye na nganga, ịhụnanya, rụzuru pụrụ iche, ọmịiko, owu ọmụma, ọbụbụenyi, ma ọ bụ ncheta - ị nwere ike okpukpu abụọ nzaghachi nke mgbasa ozi gị.
N'ime ọdịnaya nke mgbasa ozi, ụda, agba, olu, verbiage na agba nwere ike inwe mmetụta dị egwu n'echiche nke mgbasa ozi. Nke a infographic, Iche echiche vs. Mmetụta: Psychology nke Mgbasa Ozi, nke Mahadum Southern California kere Nna-ukwu nke Sayensị na Psychology etinyere na ntanetị Mmemme, na-agbaji ụdị nzaghachi mmetụta abụọ ahụ na mgbasa ozi:
Mmetụta Ọmịiko - mgbasa ozi na-eme ka ndị mmadụ nwee mmetụta nke ịbịaru akara gị.
creativity - mgbasa ozi na-eme ka ndị mmadụ chee na akara gị ga-eche echiche ma na-aga n’ihu egwuregwu.
Ihe omuma ihe a na-enyekwa ezigbo ihe atụ atọ nke mgbasa ozi ụwa n'ezie nke na-ewere ndị na-azụ ihe na mmetụta nke mmetụta, site na Dove, Coca-Cola, na Google.
Tags: adadvertisementakparamaagwa akparamaagwacoca-colaagbanduruobimmetụta ọmịikommetụtagoogle +infographicNna-ukwu nke Sayensị na Psychology etinyere na ntanetịPsychologykenche-eche echicheụdaUniversity of Southern California
GRM Ọdịnaya Ọrụ Platform: Na-eweta ọgụgụ isi na usoro azụmahịa gị